Qalabka Xadidan, Furimaha Xaglaha, Burburinta dubbe - Benyu
Si fudud loo qaado, si fudud looga shaqeeyo meelaha dhaadheer iyo cidhiidhi
Dubbe culus oo culus oo loogu talagalay dadka isticmaala xirfadaha
Tayo sare leh, waxqabad sare iyo adeegsade saaxiibtinimo qaab-dhismeedka ergonomic
Zhejiang Benyu Tools Co., Ltd. (magacii hore ee Zhejiang Zhongtai Tools), oo la aasaasay sanadkii 1993, waa soo saare aaladaha awooda koronto ee Shiinaha. In kabadan 27 sano oo shaqo adag ah iyo hal-abuurnimo isdaba-joog ah, shirkaddu waxay aasaastay nidaam hufnaan R & D, wax soo saar, suuq-geyn iyo adeegga iibka kadib.
Alaabooyin muuqaal ahAlaabooyin muuqaal ah
Dubbe Qodista 26MM BHD 2630
Culus dubbe Rotary 26MM BRH2618
Saamaynta Daloolida 13MM BID1303
Xadhig Xadhig Xannibaado Xadhigla'aan bl-jm1001 / 20v
Xadhig Xadhig Fudud Dc1001 / 12v
Saamaynta Cordless Brushless Impill Bl-cjz1301 / 20v
Shiinaha International Hardware Show (CIHS) waxaa la aasaasay sanadkii 2001. Tobankii sano ee la soo dhaafay, Shiinaha International Hardware Show (CIHS) waxay la qabsatay suuqa, warshadaha adeegga oo ay si dhakhso leh u horumariyaan. Waxaa hadda si cad loo aasaasay inay tahay bandhigga labaad ee ugu weyn adduunka marka laga yimaado INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE ee Jarmalka.
Waqtigan xaadirka ah, marka la eego qaabka ganacsiga ee warshadaha qalabka Shiinaha, qayb ka mid ah waxay soo bandhigaysaa muuqaalka "aaladda ganacsiga e-commerce", iyadoo la adeegsanayo internetka oo lagu kabayo kanaalka suuqgeynta; iyada oo la siinayo alaab qiimo jaban, waxay si caqli-gal ah u xallin kartaa dhibcaha xanuunka warshadaha gacmeed. Isku-darka ilaha kor iyo hoos ee internetka iyo warshadaha qalabka waxay macaamiisha siisaa lacag-badbaadin,